I-china Manual Spice yetyuwa Pepper Mill enamaxesha ahlukeneyo abavelisi kunye nabathengisi | Nciphisa
Ngethuba nje lincinci elincinci, unokuyigaya ngokuthanda. I-Cumin, imbewu ye-chili, ityiwa laselwandle elirhabaxa laseKorea, ipepile yasendle yaseTaiwan njalo njalo. Kodwa musa ukubeka yonke imbewu yeesame ukuze usile. Imbewu yeoyile enobumbeko kulula ukuyidibanisa emva kokugaya kunye nokuvimba izibuko lokukhupha. Ke kufuneka ihlelwe kwaye isetyenziswe.
Ngokubanzi, ibhotile yebhotile yetyuwa yetyuwa yenziwe nge-acrylic ekumgangatho ophezulu, kwaye ezinye izinto ezinje ngoqalo lwekhabhoni ziyasetyenziswa. Iibhanti ikakhulu ziziintsimbi ezingenanto okanye iiceramic blades.
Thenga iipeppercorn ezimnyama okanye ezimhlophe ezipheleleyo, uzifake kumatshini wokugaya iziqholo, jika isiphatho okanye ikepusi yebhotile ukuze ufumane umgubo wendalo omtsha. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa, kwaye kuhlala kukho iibhotile zokunonga, ezinokusetyenziselwa ukubamba umgubo womhlaba.
Zininzi iindidi zepepile, ipepile emnyama, ipepile emhlophe, ipepile eluhlaza kunye nepepile ebomvu zihlala zisetyenziswa.
Ipepile emnyama yenziwa ngamajikijolo angavuthiwe kwimidiliya yepepile. Kuqala yibilise okwethutyana emanzini ashushu ukucoca umphezulu kwaye wome. Ngethuba lale nkqubo, ngenxa yesenzo sefungus, ixolo eligqumelele imbewu liya kuba mnyama ngokuthe ngcembe lize linciphe, kwaye ekugqibeleni libe ngumaleko obhityileyo. Emva kwenkqubo yokumisa, imveliso efunyenweyo yimbewu emnyama yepepile.
Ipepile emhlophe yenziwa ngembewu isuswe ixolo. Ipepile emhlophe idla ngokwenziwa ngamaqunube avuthiweyo, afakwe emanzini kangangeveki, ahlikihlwe ukususa intsalela yempuphu, emva koko ayomise imbewu engenanto ukuze ibe ngumhlophe.
Ipepile emhlophe ihlala isetyenziselwa ukunonga isosi enemibala ekhanyayo kunye nokunye ukutya e-United States nakwamanye amazwe, kuba ipepile emnyama iyabonakala ngokulula kukutya okukhanyayo. Kuyimpikiswano ukuba ngaba ipepile emnyama okanye ipepile emhlophe iyarhola ngakumbi. Kuba ezinye izinto zolusu lwangaphandle azifumaneki kwiimbewu, ivumba leepilisi ezimbini alifani.
Ipepile eluhlaza, njengepepile emnyama, yenziwa ngamajikijolo angakhulanga. Ipepile eluhlaza eyomileyo iyawugcina umbala wayo oluhlaza ukuya kwinqanaba elithile kuba iqhutyelwe yinkqubo efana nesulfure dioxide okanye ukomisa ngumkhenkce. Imbewu yeepepile egalelwe i-brine okanye iviniga iya kubonakala iluhlaza. Amaqunube amatsha kunye nalawo angafezekiswanga anqabile kakhulu eNtshona. Zifumaneka ikakhulu kwezinye izitya zaseAsia, ngakumbi izitya zaseThai. Ivumba lamaqunube apepile asandayo anencasa kwaye amatsha, anevumba elimnandi. I-pepper engatshwanga okanye ekhethiweyo iya kubola ngokukhawuleza.
Ukukha amaqunube abomvu avuthiweyo kwi-brine kunye neviniga kunokwenza ipepile ebomvu enqabileyo; Itekhnoloji yokulondolozwa kombala wepepile eluhlaza eyomileyo inokusetyenziselwa ukomisa imbewu enqabileyo evuthiweyo ebomvu.
Egqithileyo Ibhetri yombane yetyuwa kunye nepepile lokusila i-ESP-1
Okulandelayo: Ukubaluleka kwetyuwa kunye nepepper Grinder
I-Grinder Pepper kunye neTyuwa
Mill ityuwa nepepile
Ityuwa kunye nePepper Grinder